'Amnesty International' Ityoophiyaatti; deeggartoonni Paartii mormituu hidhamaa jiraachuu ibse - NuuralHudaa
‘Amnesty International’ Ityoophiyaatti; deeggartoonni Paartii mormituu hidhamaa jiraachuu ibse
Dhaabbanni mirga namoommaaf falmu Amnesty International ibsa guyyaa har’aa baaseen, mootummaan Itiyoophiyaa hiriira iddoo garagaraatti deeggartoonni Paartilee mormitootaa godhan gufachiisaa jira jechuun qeeqe. Haaluma kanaanTorbaan kana keessa qofa naannoo Oromiyaa iddoo garagaraatti deeggartoonni ABO 78 hidhamuus mirkaneeffachuu isaa ibse.
Hidhaa fi doorsisni deeggartoota paartiilee mormitootaa fi Aktivistoota irratti raawwatamu biyyattiitti deebi’uun kan yaaddesse tahuus dhaabbatichi dubbate.
Biyyoota baha Afriikkaa fi kibba Afrikkaatti Daayrektera dhaabbatichaa kan ta’e, Deprose Muchena, hidhaan jumlaa Aktivistoota paartii mormituufi deeggartoota paartiilee mormitoota irratti raawwatamu ammaas deebi’uun Itiyoophiyaa keessatti yaaddessaa tahee jira. Hidhaa fi doorsisni filannoo bara 2020 keessa geggeeffamu duratti raawwatamu kun, mirga yaada ofii ibsachuuf fi gurmaawanii socho’uu irratti dhiibbaa guddaa uumuu danda’a” jedhe.
Dhaabbatichi iddoowwan “hidhaa fi doorsisni itti raawwatamaa jiran” jechuun kaa’e jidduu, naannoo Oromiyaa, magaalaa Finca’aa dabalatee godina Gujii lixaa fi godina Horroo Guduruu magaalaa Shaambuu tahuus ibse.
August 4, 2021 sa;aa 1:00 pm Update tahe